विश्वासको मत नलिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संकेत ! - Dainik Online Dainik Online
विश्वासको मत नलिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संकेत !
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७८, शनिबार ८ : ५२
उनीहरूले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा दलगत रूपमा एकएकजना सदस्यलाई मात्रै बैठकमा उपस्थित गराएका थिए। विपक्षीको त्यही कार्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्ने अस्त्रका रूपमा सदनमा व्याख्या गरे। उनले बहुमत गुम्दाको दिन एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने भन्नसमेत भ्याए। जसपाले कारबाही गरेर पदमुक्त भएका चार मन्त्रीको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफूसँग राजनीतिक बहुमत रहेको उनको दाबी छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।